Banaanbax looga soo horjeedo go’aanka sharciyadda loogala noqonayo soomaalida oo Noorweey ka dhacay | Somaliska
Banaanbax looga soo horjeedo go’aanka sharciyadda loogala noqonayo soomaalida oo Noorweey ka dhacay
Iyadoo uu jawiga magaaladda Oslo ee caasimadda dalka Noorweey ahaa mid aad u qabow watayna dabeeylo iyo baraf, ayaa hadana waxaa iskugu soo baxay dad kor u dhaafay labbo kun oo ruuux, kana soo horjeeday go’aanka dowlada Noorweey ay ka gaartay soomaali gaareysa 1.600 oo qof kuwaas oo ay kala laabaneeyso sharciga ku jooga dalkaasi.
Mudaharaadkan ayaa waxaa ka soo qeyb galay ajaanib ay soomaalida ka mid tahay iyo kuwa dalkaasi u dhashay. Qudbado kala duwan oo halkaasi shaqsiyaad siyaasadda ku lug leh ka jeediyeen ayey kaga hadleen xaaladda aan weli xasilneyn ee ka jirta Soomaaliya. Waxaa ay farta ku fiiqeen ineeyan Soomaaliya weli aheyn meel la isku hadleyn karo, Noorweeyna ay horey muwaadiniinteeda ugu digtay ineey u safraan. Sidoo kale waxaa qudbadihii halkaas laga akhriyey looga codsaday dowladda Noorway in ay dib uga laabato go’aanka ka dhanka ah soomaalida oo loo arko mid si gaar ah loo bartilmaameedsaday soomaalida.
Waa banaanixii ugu horeeyey ee dalkaasi ka dhaca tan iyo markii dowladda dalkaasi soo saartay go’aamo ka dhan soomaalida dalkeeda ku nool gaar kun iyo lixda boqol ee qof ee lugu wargeliyey in sharciga daganaanshaha dalkaasi lagala laabanayo. Banaanbaxii shalay ka dhacay Oslo ayaa waxaa ka soo qeyb galay qaar ka mid ah siyaasiinta soomaalida ee ku jira qaar ka mid ah asxaabta siyaasadda ee Noorway.
Maxkamadaha socdaalka oo lagu eedeeyay in aysan dhageysan caruurta magangalyo doonka ah
28 Juni: Wararka maanta ugu waaweyn
November 9, 2016 at 00:03
Dib u xasuuso shaxdii guulaha..
Wa shaxdii aan ku qaadnay EPL- ka marki inoogu dambeeyey.
Daafacyada dambe lama haayo all wey wada direen qadka dhexe keyd ayey wada galeen marka laga reebo schools oo kabaha siibay. afka hore waza ayaa ka dambeeyo.
Ninka kaliya ee shaxdaan ka dambeeyo misane boos joogta ah heesto waa mr save.